Maka: usetyenziso lweselfowuni lokumaketha kwakhona | Martech Zone
Yonke into kufuneka uyazi malunga nokuphinda umiselwe kwakhona nokumaketha kwakhona!
NgoMgqibelo, Disemba 14, 2019 NgoMgqibelo, Disemba 14, 2019 Douglas Karr
Ngaba uyazi ukuba ziipesenti ezi-2 zeendwendwe ezithenga xa zityelele ivenkile kwi-Intanethi okokuqala? Ngapha koko, iipesenti ezingama-92 zabathengi abade bacwangcise ukuthenga xa betyelele ivenkile ekwi-intanethi okokuqala. Kwaye isinye kwisithathu sabathengi abazimisele ukuthenga, bayeke inqwelo yokuthenga. Jonga emva kokuthenga kwakho kwi-Intanethi kwaye uya kufumanisa ukuba uyakhangela kwaye ujonge iimveliso ezikwi-intanethi, kodwa